Ndị a bụ ụzọ isii ndị ọzọ kachasị mma na Ibe edokwubara m | Akụkọ akụrụngwa
Ndị ọzọ na Ibe edokwubara M
Ndị niile na-amasị egwuregwu ma chọọ ịmata nsonaazụ dị iche iche a na-arụ kwa ụbọchị, na-enwekarị web dị ka ntụaka ibe edokọbara m, ebe anyị nwere ike ịchọta oke nsonaazụ ndụ ma marakwa ọkwa nke ọkwa dị iche iche, tebụl mkpochapu na nnukwu ozi enwere ike ịnweta ngwa ngwa na ngwa ngwa.
Anyị nwere ike na-ele anya na ebe nrụọrụ weebụ kachasị mma nke ụdị a, mana ọ bụghị naanị nke anyị nwere ike ịkpọ ma nwee aka. N'ihi nke a, taa, anyị ga-egosi gị n'isiokwu a uzo ozo di nma na ibe edokwubara m, oburu na akwukwo egwuru-egwu a daa otu ubochi ma obu na ichoro uzo nke abuo.
1 Gini mere Ndido Ibe M ji jee ije na peeji nke o bula?
2 akara ndụ
Gini mere Ndido Ibe M ji jee ije na peeji nke o bula?
Ruo oge ụfọdụ ugbu a mismarcadores.com abụrụla ebe nrụọrụ weebụ na-ede maka ndị niile chọrọ ị nweta nsonaazụ ndụ ma ọ bụ ọbụna ndị chọrọ ịmata ihe ọmụma buru ibu banyere egwuregwu ọ bụla, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ egwuregwu ọ bụla.
Tupu egwuregwu ọ bụla amalite, dịka ọmụmaatụ bọọlụ, anyị nwere ike ịlele nhazi nke ndị otu na otu egwuregwu, egwuregwu ndị gara aga, yana esemokwu dị n'etiti ha, ndị nwụrụ maka egwuregwu ahụ, ndị nwere ike ịnwe na ozi ndị ọzọ. Maka ndị na-eme ihe nkiri, ndị na-abụghị ole na ole, ọ na-enyekwa ozi gbasara asọmpi egwuregwu na ụfọdụ ịmata ihe ndị ọzọ.
Ozugbo egwuregwu, ihe egwuregwu ọ bụla, dị na egwuregwu, enwere ike ịnye nhọrọ abụọ. Nke mbụ n’ime ha bụ na ha na-enye anyị ihe ọmụma dị ndụ dịka ọ na - eme na 90% nke ikpe ma ọ bụ na anyị nwere naanị nsonaazụ yana ozi ndị ọzọ ozugbo egwuregwu gachara. N'okpuru ebe anyị na-egosi gị ihe niile ozi na-egosi anyị mgbe a na-egwu egwuregwu na-egwu ndụ;
Onu ogugu ihe omuma nke ibe m na-enye anyi, ma tupu egwuregwu, mgbe a na-egwu ya, na njedebe, siri ike ichota na oru ndi ozo di otu a. Ọzọkwa otu n'ime uru ndị dị egwu ọ na-egwuri egwu bụ na ozi ọ na-enye n'oge niile dị adị n'ezie ma enwere ike ịgụta njehie na mkpịsị aka nke otu aka n'ọtụtụ oge.
N'ezie, My Bookmarks nwere ngwa dị maka nbudata, enwere kpamkpam n'efu maka ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ iOS na gam akporo. N'ọnọdụ abụọ ọ na-arụ ọrụ zuru oke ma na-enye anyị ohere ịmara n'oge ọ bụla nsonaazụ egwuregwu.
Developer: FlashScore UK
N'okpuru, anyị na-egosi gị ihe ndị ọzọ kachasị mma na Ibe edokwubara m nke anyị chọtara ma na ụfọdụ anyị na-eji kwa ụbọchị;
akara ndụ Ọ bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu weebụsaịtị nke ụdị na ị na-eji na oge, ọbụna tupu My Ibe edokwubara na oru. N'agbanyeghị atụmatụ ya dị mfe, na mgbe ụfọdụ, na-enye anyị nnukwu ndụ nsonaazụ sitere na ọtụtụ egwuregwu dị iche iche.
Dị ka ọtụtụ ọrụ nke ụdị a, ọ na-enye anyị ihe ọmụma banyere egwuregwu ahụ, ọ na-agbasawanye ya na njedebe ya.
Ọzọ dị mma ọzọ na Ibe edokwubara m nwere ike ịhọrọ otu ọrụ, ọ bụ ezie na iji aha ọzọ adịghị iche. Ọ bụrụ n ’ilele nseta ihuenyo ahụ dị n’elu ederede a, ị ga - aghọta ihe anyị na - ekwu. Ma nke ahụ bụ Nsonaazụ.com Ọ bụ otu, anyị amaghị ma ọ bụ iwu ma ọ bụ iwu akwadoghị, nke weebụsaịtị mbụ anyị na-achọ ihe ndị ọzọ n'isiokwu a.
Ebe nrụọrụ weebụ a na-arụ ọrụ otu ihe ahụ dị ka nke mbụ, yana otu akụkụ ahụ ka ọ bụrụ ihe ọzọ maka oge ụfọdụ, ọ bụ ezie na nkwanye anyị bụ na n'ọnọdụ a ị ga-anọ na ibe edokọbara m ọ bụghị na mbipụta ndị ọzọ.
Na a dị nnọọ mfe imewe na-enweghị ihe ọ bụla isi graphic ibu anyị zutere Ebuka, nke na-enye anyị ọtụtụ ozi gbasara egwuregwu ndị bụ isi na egwuregwu ndị kachasị mkpa na mbara ala.
N'adịghị ka ọtụtụ ọrụ nke ụdị a, ozi yana atụmatụ ya dị mfe ma ọ nwere njedebe inye anyị egwuregwu ahụ na nsonaazụ ya, yana oge gafere, na-enweghị inye anyị nkọwa zuru ezu. N'ihi ịdị mfe ya, ọ nwere ike ịdị mma ịkpọtụrụ site na ihe nchọgharị weebụ mkpanaka ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị achọghị ịmara karịa nsonaazụ egwuregwu nke a na-egwu.
Ole na ole ndokwa ibe nwere ike iru larịị nke Ibe edokwubara m, mana obi abụọ adịghị ya na otu n'ime ndị na-abịa nso bụ SofaScore. Ma ọ bụ na ọ na-enye anyị ohere ị ga-enyocha ọtụtụ nsonaazụ dị iche iche nke ọtụtụ egwuregwu, yana ọtụtụ ozi, mana ọkachasị na Advantage na ọ na-enye ihe magburu onwe mbipute nke ngwa maka smartwatches.
Ejiri ngwa maka gam akporo Wear na-elekọta nkọwa ọ bụla ikpeazụ, nke ahụ na-enye anyị ohere ịnwe akara na nkwojiaka anyị nke ga-eme ka anyị mata nsonaazụ egwuregwu ahụ anyị chọrọ ibi.
SofaScore - Akara Live
Imirikiti ebe nrụọrụ weebụ na-aga nke ọma na-enwekarị atụmatụ aghụghọ, nke ndị ọrụ na-amasị nke ukwuu. Nke a bụ ihe gbasara bookmarksonline.com, nke nwere a atụmatụ mara mma, lebara anya ruo ntakịrị nkọwa na nke ahụ nwere ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ edozi edozi ekele maka imewe a, kamakwa ka ọ dị mfe ọ na-enye, mgbe ị na-egosipụta nsonaazụ ya yana ịnyagharịa ọtụtụ ozi ọ na-enye.
N'ebe ndị na-adịghị mma anyị hụrụ na anyị enweghị ike ịmatakwu ozi dịka na weebụsaịtị ndị ọzọ, nke ahụ bụ na ha nwere oke ịnye ozi na egwuregwu ole na ole, yana otu egwuregwu mba ụwa dị mkpa. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọọ nsonaazụ sitere na egwuregwu ndị ọha na eze na-amaghị ma ọ bụ nsonaazụ sitere na egwuregwu na ndabere, ebe a abụghị ebe gị.
Ọ bụrụ na anyị nwere mmasị naanị na nsonaazụ nke bọọlụ ụwa, nke nwere ike ịbụ nke zuru oke, isi mmalite nke ozi nwere ike ịbụ akwụkwọ FIFA na UEFA peeji nke. N'ihe banyere nke ikpeazụ, ha anya nyochaa a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndụ ọkụ site na njikọ ọzọ.
Otu uru dị ukwuu nke ọrụ a bụ na ọ na-egosi anyị ozi gbasara gọọmentị oge niile yana dịka ọmụmaatụ ndị akara, enweghi ike inwe mkparịta ụka.
Kedu ibe weebụ ma ọ bụ ngwa ọ bụla ị na-achọ kwa ụbọchị dị ka ndị ọzọ na Ibe edokwubara m?. Gwa anyị na oghere edebere maka ikwu na post a ma ọ bụ site na netwọkụ ọ bụla nke anyị nọ na ya ma ọ bụrụ na anyị na-efu nnukwu mkpa ọ bụla, anyị ga-agbakwunye ha na ndepụta a ka anyị niile nwee ike ịnweta egwuregwu egwuregwu kacha mma. .
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Ndị ọzọ na Ibe edokwubara M
Ezi ụtụtụ gịnị kpatara ibe edokọbara m anaghị arụ ọrụ na kọmputa m kemgbe August 8.
Nintendo "na - eme" enyi na YouTube
Microsoft na-ere ahịa otu Xbox One S maka ụtụ nye Paul Walker